WARBIXIN-Sidee baa General Cabdulahi Axmed Jaamac looga soo dhoweeyey Degmada Badhan ee Gobolka Sanaag
Badhan:- Waftigii uu hormuud ka ahaa Gen-ku ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Badhan ee Xarunta labaad Gobolka, boqolaal ruux ayaa sitay boodhadh soo dhawayn ah, dadkaasi ayaa waxa wajiyadooda ka muuqtay Farxad iyo soo dhawayn, Gen-ka ayaa waxa salaan siiyay Ciidamada Deegaanka kuwaasi oo ku jiray Heegan sare.
Sidaanu kor kusoo xusney waxaa soo dhoweeyey musharaxa dadwayne aad u balaaran oo uu horkacayeen Ururadda Bulshada iyo Qaybaha kala duwan ee Bulshada iyo waliba Gudiga Magaalada Badhan iyo waxgaradka culumada cugaasha isimada iyo waliba dhamaan dadwayanaha degmada Badhan.
Dadweynaha soo dhoweeyey wefdigan ayaa ruxayey caleemo qoyan iyo waliba halku dhigyo, sawiro iyo waliba Hesso Wadani ah muujinaya xamaasada Magaalada Badhan,
Waxaa sidoo kale magaalada Badhan soo gaarey wefdi Her wasiro ah oo ka kala yimi Magaloyinka Boosaaso Gawoowe isla markanaan ka qeyb qaatey soo dhoweynta Generalka iyo wefidgiisa waxaana wefdiga Wasirada ah hogaaminayey Wasirka Xananada Xolaha iyo Bereha Cali Bureed.
Magaalada Badhan ayaa maanta u ekeyd mid aad moodid iney ka jirto maalin ciideed iyadoo aad arkeysid faraxad aad u badan oo ay dadku hayaan isla markaan ay dadweynuhu isugu tahniyadaynayeen soo dhoweynta Generalka iyo Wefdigiisa.
Dhalinyada Sportska Magaalada Badhan ayaa waxay ka cayaartey door weyn oo iyagoonWatay Dharka Sports ka iyo Sawirada Generalka iyo waftigiisa kuna dhawaqayeey sodhowow .sodhowow.
Magaalada ayaa sidoo kale waxaa xirnaa goobaha Ganacsiga iyo suuqyada laga adeegto iyadoo dhamaantood ay isu taageen Wadoyinka Waween ee magaalada Badhan sidi ay uga qayb qadan lahayeen soo dhoweynta wefdiga.
Bahda Saxaafada Sanaag/Laasqoray/Badhan